Gịnị bụ Mmemme Pilot Ọmụmụ Ihe Ọmụmụ Cannabis na Illinois?
Ihe niile I Kwesịrị Aboutmata Banyere Mmemme Pilot Ọmụmụ Ihe Ọmụmụ Cannabis na Illinois
Kedu ihe mmemme pilot Mahadum Community College nke Cannabis na Illinois?
The Mmemme Pilot Community College Cannabis na Illinois ka e mere iji zụọ ndị ọkachamara ga-ahazi ụlọ ọrụ cannabis n'ọdịnihu. Collegelọ akwụkwọ kọleji dị na mpaghara a pụtara ụlọ akwụkwọ kọleji obodo ọ bụla.
Maka ka e nwee ike mezuo iwu Illinois cannabis n'ụzọ gara nke ọma, ọ dị mkpa ịzụ ndị ga-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụghị naanị na a ga-azụ ndị a n'iwu, mana a ga-eduzi ha otu esi ejikwa ụlọ ọrụ cannabis.
Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma:
Nlekọta nke Mmemme
Ngalaba ọrụ ubi ga-ahụ maka ịhazi usoro ịkụzi ụlọ ọrụ kọleji nke obodo na steeti Illinois. Tupu oge iwu dị n'ọrụ na Jenụwarị 2020, ngalaba ọrụ ugbo na-achọ inweta ikikere opekata mpe karịa asatọ na kọleji obodo n'ime steeti ahụ.
Ka ọ na-erule 2021, kọleji ga-enwe ikike inye ihe omume cannabis ga-ahapụ ka ịmalite ịmụrụ ụmụ akwụkwọ nwere mmasị. Ebumnuche ebe a bụ ịkwadebe ụmụ akwụkwọ ịbanye na ụlọ ọrụ cannabis. Ọzụzụ a ga-elekwasị anya na azụmaahịa yana omume ọkachamara, yana n'okwu gbasara iwu ndị egwuregwu na ụlọ ọrụ ga-enwerịrị ihe gbasara ya.
Ọ bụghị naanị mmadụ niile ka a ga-ekwe ka ha mee mmemme cannabis. Onye ọ bụla sonyere ga-ekwesịrị ịbụ ma ọ dịkarịa ala 18 afọ iji denye aha maka ọzụzụ a. Na mgbakwunye, kọleji obodo ga-enye onye ahụ nke nwetara ọzụzụ ahụ nke ọma na otu esi ejikwa azụmaahịa cannabis.
Akwụkwọ ikike ikikere Mmemme Programlọ Akwụkwọ Ọzụzụ Ndị Nlekọta nke Communitylọ Akwụkwọ Obodo
A ga-enye akwụkwọ ikike dị ka site na afọ 2020. Klasịla niile nwere mmasị ịnye mmụta a ga-achọ itinye akwụkwọ ha maka akwụkwọ ikike tupu July 1 2020. A ga-enye akwụkwọ ikike ahụ maka uru, yana ngalaba ọrụ ugbo ga-arụ ọrụ na Ikike ịrụ ọrụ maka ibute ndị na-achọ akwụkwọ ikike inweta ya. Factorsfọdụ ihe ndị a ga-atụle gụnyere:
Ala di iche-iche
Kọwaa atụmatụ usoro ọmụmụ
Ahụmahụ gbasara ahụ ike wii wii na mpaghara ndị ọzọ metụtara ya
A ga-enye ụlọ ọrụ nwere ikikere ụmụ akwụkwọ obere obere 5%
A na-etinye usoro nchekwa iji hụ na ahịhịa na ngwaahịa cannabis anaghị adaba na aka adịghị mma.
Pla ga - etinye akwụkwọ maka ụmụ akwụkwọ na - eme nke ọma
Community College Cannabis Pilot Program Pilot chọrọ
Ulo oru nke nwetara nnabata iji duzie usoro ihe omumu a ga-acho iso iwu. Nke mbu, agaghi ekwe ka ulo akwukwo a nwee ihe kariri akuko osisi karia iri na oge ahihia n’oge obula. Onweghi nke osisi na ihe omuma ya nke a ga-ebupu site na ulo oru ahụ belụsọ ma a ga-eburu samali ahụ gaa n'ụlọ nyocha. Ọzọkwa, kọleji ahụ ga-ahọpụta onye nnọchi anya nke na-ejigide akụrụngwa nke ndị na-abanye na ngalaba cannabis. Ihe ndi ozo choro:
Will ga-amachi ebe ị na-eto wii wii. Usoro mmụta ahụ ga-enweta naanị maka ndị na - eme cannabis
A ga-enyerịrị ụlọ ọrụ na-ebugharị ibuga ngwaahịa cannabis site na kọleji obodo gaa ụlọ nyocha.
Ngwa ahịa mkpụrụ osisi na-anaghị ejikọ ụlọ nyocha ga-emebi n'ime izu ise mgbe egbutechara ha.
Onye na-ahụ maka ngalaba kwesịrị ịnọ n'ụlọ ọrụ cannabis n'oge niile mgbe nwata akwụkwọ. Iwu ahụ kwuru na, "Ọ dịghị nwata akwụkwọ na-ekere òkè na usoro mmụta cannabis dị mkpa iji nweta asambodo nwere ike ịbanye n'ụlọ ọrụ nke onye ikike ya belụsọ ma onye nnọchi anya ngalaba ahụ dịkwa.
Ndị uweojii na-enyocha nyocha na Random
Ọrụ ubi na ngalaba ndị uwe ojii steeti nwere ikike ịme nyocha ndị a na-enwetaghị ego. Na ndenye ego aghara aghara ga-abụ naanị ebe ndị akụrụngwa cannabis dị.
Etu ị ga -esi nweta kaadị njirimara ndị ọrụ
Mmadu aghagoro itinye akwukwo ma nye ego nke nloghachi nke a ga-enye ya na kaadị njiri mara ihe. Ọ ga-adịkwa mkpa ka emezigharị kaadị ahụ na etiti oge. Mmadu ga-amara ma ekwenyela kaadi ha ma obu juo ya n’ime ubochi iri ato ha nyechara akwụkwọ ntinye ha. Ọ dị mkpa iburu n’obi na ekwesịrị itinye akwụkwọ niile dị mkpa maka ngwa a ka ọ gafee.
Ozugbo emere akwụkwọ anamachọihe ahụ, onye na-arịọ arịrịọ ahụ ga-enweta kaadị njirimara onye ọrụ n'ime ụbọchị iri na ise malite na ụbọchị nkwado. A ga-achọrọ onye na-elekọta gị ka edebe kaadi ahụ oge niile ma ọ bụrụhaala na ha nọ n'ụlọ mkpọchi. "Ma ọ bụ akụrụngwa nke onye nnọchi anya ya."
Ihe omuma ndi di na kaadi njirimara gunyere:
Aha onye nwe ya
Wasbọchị enyere kaadị ahụ
Expbọchị ọpụpụ kaadị
Nọmba amata nke mkpụrụedemede. Nọmba a ga-enwe ọnụọgụ 10 nke nwere mkpụrụedemede 4 na ọnụọgụ anọ
Foto njide kaadi
Aha ụlọ akwụkwọ kọleji ebe a na-arụ ọrụ na kaadị kaadi
Kedụ ihe ga-eme ma ọ bụrụ na emebie Iwu ahụ?
Ngalaba ọrụ ubi ga-enwe ikike iwepu kaadị onye ọrụ nnọchiteanya ọ bụla ma ọ bụrụ na ha anaghị agbaso iwu dịka ekwuru na ya na iwu cannabis. Enwere ike ịkagbu ikikere mmemme ahụ ma ọ bụrụ na ọ na-emebi ọdịnaya ọ bụla na iwu a. Iwu ahụ kwukwara na, "Ndị ọrụ ga-akagbu ikike inye akwụkwọ asambodo mahadum ọ bụla obodo nke wepụrụ ikike ya."
Nkwupụta Ọganiihu na Ọrụ nke Onye Pilot
Dabere na iwu Illinois, "Site na December 31, 2025, Onye Ọchịchị na - ahụ maka ndị na - ahụ maka ndị na - ahụ maka ndị mmadụ, ga - enye ndị gọvanọ na General Assembly akwụkwọ mkpesa". Offọdụ n’ime akụkọ akụkọ a ga-abụ:
Ihe omume nchekwa gbagoro na ụlọ ọrụ ikikere niile. Ekwesiri inwe nkọwa zuru oke banyere ihe ndị e mere na ụlọ ọrụ ebe edekọtara ihe omume ndị ahụ.
Statistics na ụmụ akwụkwọ debanyere aha mmemme ọ bụla nke cannabis. Onu ogugu onu a kwesiri ibu nke nwoke na ndi nwanyi, na ulo akwukwo nke obodo.
Onu ogugu umu akwukwo ndi mutara nke oma cannabis na ulo akwukwo ndi enyere ikike
Onu ogugu maka onodu oru nye umu akwukwo mgbe emechara mmemme a
Ọ bụrụ n’inwere mmasị isonye na Community College Cannabis Vocational Pilot Programme na Illinois, ị kwesịrị ịgwa onye ọka iwu nwere ahụmahụ ga-enyere gị aka ịghọta ihe achọrọ dịka iwu si dị, ma duzie gị na usoro ngwa.